6 tilmaamood oo loogu talagalay ka shaqeynta martigelin dhacdo | Sameynta iyo daraasadaha
6 tilmaamood oo loogu talagalay ka shaqeynta martigelin dhacdo
Maite Nicuesa | 09/06/2021 20:51 | La cusbooneysiiyay 09/06/2021 22:18 | Ka Bixitaanka Shaqada
Ma rabtaa inaad u shaqeyso sidii martigeliye dhacdo? Tani waa shaqo bixisa fursado badan oo shaqo maxaa yeelay shirkaduhu waxay qabtaan dhacdooyin badan oo shirkadeed. Tababbarka iyo Daraasaadka waxaad ku leedahay lix talo oo aad ugu shaqeysid sidii marti-geliye dhacdo.
1 1. Qor resumeygaaga iyo warqadaada daboolka ah
2 2. Koorsada martigelinta Dhacdada
3 3. Wakaaladaha martigelinta dhacdooyinka
4 4. Shaqada waxay u fidisaa dadka xafladaha martigeliya
5 5. Kalandarka carwooyinka iyo shirarka
6 6. Abuur astaantaada gaarka ah si aad u kala soocdo naftaada
1. Qor resumeygaaga iyo warqadaada daboolka ah
Sida xirfad kasta oo kale, farsameynta a manhajka qoraalka shakhsi ahaaneed ayaa fure u ah kor u qaadista shaqo raadinta qaybtan. Tababbarka iyo waaya-aragnimada lagu sheegay manhajka waxbarashada waa in lala jaanqaadaa ujeeddada ka shaqeysiin ahaan marti-gelin dhacdo
Taasi waa, ha ku darin koorsooyinka aan ku darin qiimaha astaantaada shakhsi ahaaneed. Waxaa jira dhacdooyin noocyo kala duwan leh. Koongareesyadu badanaa waa jaamacado. Dhinaca kale, shirkaduhu sidoo kale waxay qabtaan dhacdooyin shirkadeed.
2. Koorsada martigelinta Dhacdada
Tababar gaar ah ayaa albaabada kuu furaya maxaa yeelay barnaamij ka mid ah astaamahan ayaa lagu tababaraa kuwa doonaya inay horumariyaan xirfaddan. Waxaa jira xirfado iyo karti badan oo kuwa howshan fulinaya ay tahay inay muujiyaan. Aqoonta luqadaha waa furaha, maadaama, tusaale ahaan, qaar ka mid ah ka qeyb galayaasha dhacdada ay ku hadli karaan Ingiriis, Faransiis ama Jarmal. Xirfadaha bulshada sidoo kale waxay muujinayaan heer sare xirfad kuwa bixiya adeeg macmiil ugu fiican.
3. Wakaaladaha martigelinta dhacdooyinka
Waxaa jira mashruucyo ku takhasusay qaybtaan. Wakaaladaha iska kaashanaya barnaamijyada dhacdooyinka kala duwan oo aad u diri karto CV-gaaga si ay ugu diraan warqaddaada daboolka ah. Internetka waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan hay'ado kala duwan. Hubi websaydhka iyo shabakadaha bulshada ee mashruuc kasta. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo aad jeceshahay inaad caddeyso, kala xiriir hay'adda habka loo bixiyey ujeedkan websaydhka hay'adda.
4. Shaqada waxay u fidisaa dadka xafladaha martigeliya
Shaqooyinka tooska ah ee la soo bandhigo waxay ku fadhiyaan meel muhiim ah shaqo raadinta firfircoon. Wada tashiga joogtada ah ee kanaalkan khadka tooska ah waxaad ka heli kartaa xayeysiisyo gaar ah. Kadib, si taxaddar leh u akhri xayeysiiska faahfaahinta shaqada iyo shuruudaha ay tahay inay buuxiyaan kuwa isu soo bandhigaya habka xulashada.
5. Kalandarka carwooyinka iyo shirarka
Haddii aad jeclaan lahayd inaad u shaqo tagto sidii martigeliye dhacdo, waxaa lagugula talinayaa in lagu wargeliyo dhacdooyinka ugu muhiimsan ee dhaca sanadka oo dhan. Waxaad ka heli kartaa dhacdooyin magaalooyin kala duwan. Hay'addee ugu yeertaa falka? Waxaad u badan tahay inaad awoodid u dir resumeygaaga si ay xisaabtaada ugu xisaabtamaan dabaaldegyada mustaqbalka.
Isku xirka ayaa fure u ah shaqo raadinta maanta. Sidoo kale waa faa'iido inaad u timaaddo inaad u shaqeyso sidii martigeliye dhacdo, maaddaama kartiyo kale oo qayb ka ah shabakaddaada xiriirada ay sidoo kale kuu sheegi karaan mowduucyada la xiriira xirfaddan.
Kaqeybgalka noocyadan dhacdooyinka ah ayaa kaa caawin kara inaad sifiican u fahamto xirfadda martigelinta dhacdada. Talada aqoonyahanadan ayaa fure u ah maxaa yeelay waxay siiyaan daaweyn dhow kuwa jooga.
6. Abuur astaantaada gaarka ah si aad u kala soocdo naftaada
Waxaad dhiseysaa astaantaada shakhsi ahaaneed wixii ka dambeeya dib-u-dhiskaaga. Waxaad kula xiriirineysaa xirfad-xirfadeedkaaga habdhaqankaaga. Waqtiga oo la ilaaliyo waa muujinta mas'uuliyada kuwa ka shaqeeya sidii martigeliye dhacdo. Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa in muuqaalkan uu leeyahay rabitaan ah inuu u shaqeeyo koox ahaan. Kala shaqee mashruucyada xirfadlayaal kale oo ka dhiga shirweynaha mid guuleysta.
Marka lagu daro qaadashada koorso si aad ugu shaqeyso sidii martigeliye dhacdo, waxaad sidoo kale ka qaybqaadan kartaa aqoon isweydaarsiga ku saabsan hadalka dadweynaha. Sidan oo kale, waxaad ku kasbatay xirfado cusub, ilo iyo karti kaa caawin doonta inaad sare u qaaddo noocaaga ugu fiican.
Maxay yihiin fikradaha kale ee aad rabto inaad la wadaagto Tababarka iyo Daraasadaha si loo gaaro himiladan xirfadeed?
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Daraasado » Ka Bixitaanka Shaqada » 6 tilmaamood oo loogu talagalay ka shaqeynta martigelin dhacdo
Sida loo shaqo tago Amazon
Muxuu sameeyaa kaaliyaha kalkaaliye caafimaad?